‘स्टेज शो’मा रुचि छैन–पूजा शर्मा, नायिका – Everest Times News
‘स्टेज शो’मा रुचि छैन–पूजा शर्मा, नायिका
किन आजकल तिम्रो मन मैलो भो
फेरि हाम्रो लभ पर्ने कहिले हो…
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ फिल्मको यही गीतले युट्युबमा करोडको भ्यु कटाएसँगै यस फिल्मकी नायिका पूजा शर्मा पुनः चर्चामा छाएकी छन् ।
प्रेमगीतको ‘जब पुग्छु रिभरसाइड’मा बोल्ड अवतारमा देखिएकी पूजा पछिल्लो फिल्ममा भने फरक भूमिकामा देखिन थालेकी छन् ।
‘मधुमास’ बाट लिड एक्ट्रेसको भूमिकामा देखिएकी उनी यतिबेला छैटौं फिल्म रामकहानीको तयारीमा छिन् । उनको डेब्यु फिल्म भने थ्री लभर हो ।
सिन्धुपाल्चोक चौतारामा जन्मेकी पूजा अहिले पर्यटन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् । उनै नायिका पूजा शर्मासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
रामकहानीको ‘रिलिज डेट’ नै सार्वजनिक गरिसक्नुभएछ, भ्याइन्छ होला ?
अहिले यही रामकहानी फिल्मका लागि बिजी हुन थाल्या छु । यसको स्क्रिप्ट पढिरहेको छु । म आफै प्रोड्युसर भएकाले पनि समय अझै बढी लगाउनुपरेको छ । अर्को वर्षको भदौ २२ गते रिलिज हुनेगरी यही फागुन १ बाट सुटिङ हुदैछ । योजना बनाएर काम थालेकोले मजाले भ्याइन्छ ।
फिल्मको नामै रामकहानी, दुःखका कथा होला ?
नाम राम कहानी भए पनि फिल्मको कथा रमाइलो छ । यो त कमेडी फिल्म हो । यहाँ धेरै जना कमेडियनहरुको पनि भूमिका रहनेछ ।
भनेपछि चकलेटी फिल्मबाट कमेडी फिल्मतिर लाग्नुभयो ?
यो मेरो पहिलो कमेडी फिल्म नै हो । सधैं एकैनाशको फिल्ममै अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन नि । अहिले दर्शकको माग नै कमेडी र चकलेटीको छ । यी दुईमा मलाई काम गर्न पनि मजै आउँछ ।
कतिपय कलाकार एकैपटक धेरै फिल्ममा हात हाल्छन्, तपाई एउटै फिल्ममा महिनौ बिताउनु हुने रहेछ ?
एउटा काम पुरा नभइ अर्कोमा हात हाल्ने बानी छैन मेरो । आफूले शुरु गरेको काममा फोकस गर्न पनि त्यसो गरेकी हुँ । यसले आफूले लिएको प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ ।
तपाईं अभिनित फिल्ममा ‘टुरिजम फ्लेभर’ आउँछ, यसको पछाडि कुनै कारण छ कि ?
पहिलो त म टुरिजमको स्टुडेन्ट हुँ । फिल्म सुटिङ अघि हामी कुन ठाउँमा सुटिङ गर्ने भनेर छलफल गर्छौं । त्यसमा मेरो सुझाव चाहि टुरिजम डेस्टिनेसनमै गरौ भन्ने हुन्छ । प्रेमगीत, म यस्तो गीत गाउँछु लगायत अरु फिल्महरु पनि त्यस्तै ठाउँमा सुटिङ भएका छन् । यही फिल्म हेरेर दुई वटा साउथ इन्डियन फिल्म पनि हाम्रै फिल्म सुटिङ भएको ठाउँमा आउने भएको छ । यसले के देखाउँछ भने फिल्मबाट पनि टुरिजम प्रमोसन गर्न सकिन्छ ।
तपाई अभिनित फिल्मका गीत हिट, फिल्म फ्लप हुन्छन् भन्छन् नि ?
गीत त हिट नै छन् सबैले हेर्नु भएकै छ । यो कुरा साँचो हो । तर, फिल्म फ्लप भयो भन्ने कुरा चाँहि म माँन्दिनँ । किन भने प्रेमगीतलाई नै हेर्नुहोस एक करोड पटक हेरिसकियो । सबै फिल्म हिट पनि त हुन सक्दैन नि । यही प्रेमगीतबाट नै मेरो करिअर चेन्ज भएको हो ।
गायिका पनि, फिल्म निर्माता पनि, फिल्म प्रचारका लागि विदेशमा कतिको पुग्नुहुन्छ ?
गीत त अनिल सिंहसँग गाएकी छु । एकपटक मात्र । निर्माता चाँहि म यस्तो गीत गाउँछुमा र अब आउने रामकहानीमा भएकी छु । अहिलेसम्म पोल्यान्ड, कोरिया, थाइल्यान्ड, युरोपसम्म पुगेकी छु फिल्म प्रचारका लागि ।
स्टेज शोमा निम्तो आउँछन् होला नि ?
निम्तो आउँछ । तर, मलाई स्टेज शो गर्नमा रुचि छैन । त्यसैले त्यस्ता निम्तोमा म जान सक्दिनँ ।
कतिपय निर्माता, कलाकार विदेश जान मरिहत्ते गर्छन नि ?
बाहिर जाने भनेको धेरैजसो स्टेज शोका लागि हो । स्टेजमा डान्स सो गर्न निम्तो आउँछ । तर, स्तरहीन स्टेजमा कसरी सो गर्ने ?
कलाकारको कमाईको बलियो आधार स्टेज सो हो नि हैन र ?
फिल्म क्षेत्रमा कमाई गर्छु भनेर आएकी होइन । म काम गर्न आएकी हुँ । काम राम्रो गर्छु । मेहेनत गर्छु ।